Ahoana ny fomba ahafahana manao lisitry ny rindranasa mifandraika amin'ny vola azo ampiasaina?
Izany no resaka lohahevitra tsara, indrindra satria ny fiarovana ny fandrosoana maharitra miaraka amin'ny mombamomba ny backlinks dia tsy azo tanterahana afa-tsy amin'ny famoronana harena azo avadika, na dia ny kalitao avo indrindra aza. Mazava ho azy, tena zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hanamboarana rakitra backlinks izay manohana ny fananana harena azo antoka. Inona no mahatonga ny soa azo ampiasaina? Ampiasaina amin'ny ankapobeny, ny voka-pifandraisana azo antoka dia midika ny votoatin'ny pejy ampitomboina izay hanompo anao hananganana rakitra maromaro, manaraka, fametahana, tiana, ary ny sisa, araka ny filazanao amin'ny alàlan'ny fanambarana ho an'ny dingan'ny fambolena voajanahary. Saingy ny zava-drehetra dia ny fampiasana ny vombikan-doka rehetra dia mila fampiroboroboana - ary ity hevitra tena tsotra ity dia mbola tsy dia mahazatra loatra amin'ny mpizara dizitaly sy ny SEOs. Eny, fantatr'izy ireo ny fomba ahafahana mampifandray ny mpampiasa amin'ny backlinks tokony ekeko, ohatra amin'ny alalan'ny fitaovana avo lenta amin'ny fanehoana an-tsarintany sy amin'ny fahaizana amam-pahalalana. Nefa avelao hiatrika izany - ny sisa amin'ny fampiroboroboana an-tserasera sy ny varotra dia matetika voavadika, eny fa na dia mpividy tranonkala sy tompona orinasa an-tserasera aza. Izany no mahatonga ahy hanadihady ny fomba fijery tsara indrindra momba ny fomba mahomby hahafantaranao ny fomba ahafahana manao bakalorea bebe kokoa amin'ny marketing-votoaty.
Alohan'ny zavatra hafa dia izao no tsy maintsy ataontsika ho azo antoka: tsy dia misy ifandraisany amin'ny dokam-barotra afa-tsy ny fanalana ny fividianana, na farafaharatsiny. Midika izany fa ny teti-pokonanao nalaina nalaina tamin'ny maridrefy dia tsy azo ampiasaina mba ho toy ny "tady magnety. "Fa ny zavatra azonao atao dia mampifandray ny ampahany amin'ny ezaka ankapobeny - indrindra mba hamporisihana ny fividianana rohy amin'ny tranokala orinasa na blôgy miaraka amin'ny komity ara-barotra. Noho izany, etsy ambany dia tonga lisitra fohy momba ireo bala amin'ny bala hanampy anao amin'izany.
Ny fandinihan-java-tsarobidy - no zavatra voalohany hodinihina amin'ny fanoloran-kevitra sy ny fanangonam-bokatra. Ny ilainao amin'ny fanombohana kickass tena mety dia anarana fantatra amin'ny anarana ao amin'ny orinasa na orinasa orinasa na orinasa orinasa iray - toerana izay mamorona fomba ahafahana manorina rohy.
Mitondra fahafahana - Ny zavatra manan-danja manaraka tokony hodinihina momba ny fananananao. Mazava ho azy, mety hisy karazana fomba sy karazana fampiasana maro samihafa, izay miankina indrindra amin'ny fifaninanana marefo, ny karazana varotra isan-karazany, ny fomba fanalefahana ny ezaka hanatanterahana ireo tanjona, ary koa ny fahazoana fahafahana mifanaraka amin'ny vola aloanao - amin'ny ny fepetra fampiroboroboana amin'ny aterineto, ary koa ny famoronana kisarisary sy ny fandraketana votoaty.
Fanadihadihana manokana mba hahatonga ny ankamaroan'ny tetikasa fanangonam-peo amin'ny ankapobeny efa nampiasain-dry zareo ny mpifanolobodirindrina aminao, mifanandrify amin'ny fahazoanao misimisy kokoa hisorohana ny fandripahana mahery vaika efa manangona ireo mpanohitra tsy mitongilana anao.
Ny fandraisan'andraikitry ny fiarahamonina mba ahafahana misoroka fampielezana amin'ny Internet, famaritana, rohy ary tarika fitarihana.
Fampiharana amin'ny fanorenana rohy tapaka sy ny fampiasana saro-bidy sary.
Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fandraharahana, ny fanamafisana ny fampidirana ny sehatra fitsinjaram-pahefana sy ny fanaraha-maso iraisana amin'ny hetsika ho avy ho an'ny fandraisana anjara bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina sy ny fividianana rohy Source .